National Power News:: ब्रेन स्ट्रोक : कसलाई, किन र कसरी हुन्छ ? National Power News:: ब्रेन स्ट्रोक : कसलाई, किन र कसरी हुन्छ ?
पक्षघात अर्थात ब्रेन स्ट्रोक दिमागको कुनै भागमा रक्त सञ्चार बन्द हुनु अथवा कम हुनाको कारण हुन्छ । दिमागमा अक्सिजन तथा पोषक तत्वहरुको कमी हुनाले ब्लड भेसल्स अर्थात रक्त बाहिकाहरुका बीचमा रगत जम्नाले यसको क्रियाहरुमा बाधा पुग्छ । जसका कारण दिमागका मांशंपेशीहरु नष्ट हुन थाल्छन्, जसका कारण दिमागले आफ्नो नियन्त्रण गुमाउँछ । यसलाई नै स्ट्रोक अथवा पक्षघात भनिन्छ । यदि यसको उपचार समयमा नै भएन भने दिमाग सधैंका लागि ड्यामेज हुनसक्छ । जसका कारण मानिसको मृत्यु पनि हुन सक्छ ।
आज विश्वमा करीव ८० मिलियन मानिसहरु ब्रेन स्ट्रोकको समस्याले ग्रसीत छन् । ५० मिलियन भन्दा बढि मानिसहरु स्थाई रुपमा विकलाङ्ग भैसकेका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार २५ प्रतिशत ब्रेन स्ट्रोकका विरामीहरुको औषत उमेर ४० वर्षको रहेको छ । यो कुरालाई ध्यान दिँदै हरेक वर्ष अक्टोबर २९ का दिन वल्र्ड स्ट्रोक पनि मनाइन्छ । जसको उद्देश्य स्ट्रोकको रोकथाम, उपचार र सहयोगप्रति मानिसहरुको जागरुकता बढाउनु हो ।
संसारभरीमा ब्रेन स्ट्रोकलाई मृत्युको तेस्रो कारण मानिन्छ । नेपालमा पनि ब्रेन स्ट्रोकका कारण धेरै मानिसहरुले आफ्नो ज्यान गुमाएका छन् । यसो हुनुको कारण यहाँ ब्रेन स्ट्रोक जस्तो मेडिकल इमर्जेन्सीको स्थितिमा यसको लक्षण, कारण, रोकथाम र तत्काल उपायप्रति जनजागरुकताको धेरै अभाव रहेको छ । ब्रेन स्ट्रोकका बिरामीहरुलाई तत्काल उपचार गराउनाले उनीहरु ठिक हुने सम्भावना ५० देखि ७० प्रतिशतसम्म हुन्छ ।